Amakhambi amaShayina, i-Herbal Extract, i-Herbal Tea - iDrotrong
20 Isigidi+ Isizinda sokutshala esingamakhilomitha-skwele angama-20
25 + 25+ umkhakha isipiliyoni
8000+ 80,000 ㎡ imboni
2000 + Amathani ayi-20000 Umphumela Wonyaka
Kusukela ngo-1995I-Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. ibisebenza ekwakheni lonke uchungechunge lwezimboni zamakhambi aseChina, okubandakanya izithombo zamakhambi zaseChina, ukutshala, ukucubungula okuyisisekelo, ukucubungula okujulile, ukukhipha amakhambi nokuhweba.
Ngokuthuthukiswa kwenkampani yethu, sesisungule isisekelo sokutshala kanye nesisekelo sokukhiqiza samakhambi aseChina. Ngesisekelo sokutshala, sine-Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus njalonjalo, ehlanganisa amamitha-skwele angaphezu kwezigidi ezingama-20. Kwesisekelo sokukhiqiza, sinezimboni ezimbili zokucubungula okuyinhloko nefektri eyodwa yokukhipha amakhambi ehlanganisa ngaphezu kwamamitha-skwele angama-60,000. Sihlela ukwakha ifektri entsha yokukhipha amakhambi nemboni yemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo kungakapheli iminyaka emithathu.
Isisekelo sokutshala neFektri
Amamitha ayi-20 Million Square Planting Base & 80,000 ㎡ factory
Amakhambi amaShayina okuningi >>
Herbal Khipha okuningi >>
Itiye Lamakhambi okuningi >>
Imikhiqizo Yezempilo okuningi >>
Kulezi zinsuku, abantu banaka kakhulu impilo yabo, ngakho-ke, imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo eyengeziwe iyathandwa ngabantu.I-Drotrong inikeza amakhambi asezingeni eliphakeme futhi ikhishwe njengezinto zokusetshenziswa zemikhiqizo yokunakekelwa kwezempilo. Izinto zethu eziluhlaza ziphephile, zemvelo ngentengo ephansi.
Isibhedlela kanye neDrug Store
Imithi yendabuko yamaShayina (TCM) iyindlela yokwelashwa eyaqala ezinkulungwaneni zeminyaka edlule eChina. Okuvame ukubizwa nge- "TCM," futhi abasebenza basebenzisa amakhambi ukuvikela noma ukwelapha izinkinga zempilo. Amakhambi we-Drotrong Chinese asetshenziswa kakhulu esibhedlela nasezitolo zezidakamizwa, imvelo eyi-100% ngaphandle kokungcola, okuyisinqumo esingcono kakhulu emakethe yakho ngentengo eqondile yasefektri.
Ukusetshenziswa kwesithasiselo se-herbal feed kubaluleka ekukhiqizweni kwezilwane ngenxa yokuvinjelwa kokusetshenziswa kwama-antibiotic athile, imiphumela eyinsalela eyingozi nokusebenza kahle kwezindleko. IDrotrong inamakhambi amaningi futhi ikhishwa engasetshenziselwa izithasiselo zokuphakelwa kwamakhambi.
Amafektri amaningi okwenziwa kwemithi amukela amakhambi amaShayina noma amakhambi njengezinto zawo zokusetshenziswa. IDrotrong inesisekelo sokutshala, imboni yokulungisa amakhambi nefektri ye-herbal extrat. Kusuka kokulukhuni okwenziwe ngamakhambi kukhishwa ngamakhambi, singakunikeza insizakalo ye-OEM engonga isikhathi nemali yakho.
Manje njengoba imakethe yobuhle igcwele izimonyo zamakhambi. Abantu bakhetha izimonyo zamakhambi ngoba ziphephile, zilungele zonke izinhlobo zesikhumba futhi azinayo imiphumela emibi. Amakhambi we-Drotrong Chinese kanye nokukhipha kungasetshenziswa embonini yezimonyo zamakhambi.
Amasampula wamahhala wakho
Ungahlola ikhwalithi yethu ngamasampuli
Chofoza ukuze uthole amasampula
Herbal granule workshop waqala kwecala pro ...
Indawo yokusebenzela ye-herbal granule eqale ukukhiqizwa kwesivivinyo, okusho ukuthi i-Astragalus, i-forsythia, i-bupleurum nezinye izinto zokwelapha zoqobo zizocutshungulwa kube izingcezu zamakhambi kanye namafomula amafomula kulayini wethu wokukhiqiza ngokuzayo, futhi kuzoya ...
IMaca idabuka ezintabeni zaseAndes eziseNingizimu Melika ezinamamitha angama-3500-4500. Isatshalaliswa ikakhulukazi endaweni yemvelo iPuno maphakathi nePeru nedolobha lasePuno eSoutheast Peru. Yisitshalo sohlobo lweLepidium meyenii eCruciferae. Njengamanje, enkulu ...
Ubisi lwamafutha omunga
Amafutha obisi lwamakhaza luhlobo lwamafutha ezempilo adliwayo elenziwe ngobisi lwembewu kawoyela. Inenani eliphakeme lokudla okunempilo. Isithako esiyinhloko samafutha e-thistle obisi yi-unsaturated fatty acid, ebalulekile ku-fatty acid, okungukuthi i-linoleic acid (Okuqukethwe okungama-45%). Ubisi ...
U-Whatsapp: +86 13908068569
Bhalisela ukuthola izindaba zakamuva nemicimbi (ukukhushulwa, imikhiqizo emisha njll.)